Iyo Yakakwana Fusion Ye Dhizaini Uye Art | Maria Belousova
musha / Interior design / Iyo Yakakwana Fusion Ye Dhizaini Uye Art | Maria Belousova
2021 / 06 / 19 kupatsanuraInterior design 7089 0
Pakutanga Yakabudiswa naEos Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Maria Belousova mudiki uye akanaka dhizaina kubva kuUkraine. Iye akanaka pakupa runako kunzvimbo nenzwi rakapfava uye rakachena dhizaini. Muzviitiko zviviri izvi, dhizaini akashandisa hunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi hwepamusoro uye inodziya mamiriro emukati, zvichikanganisa dhizaini nemweya wounyanzvi uye ichideredza hunhu hwenzvimbo.
Dhizaini yemuchena wakachena
Iyo chena ruvara inomiririra yakakwira mweya sublimation, ine maverick maitiro uye chirevo, kutanga yakadzika resonance pakati pevanhu nenzvimbo, vanhu uye hupenyu.
Mugadziri akashongedza tafura, tafura uye zvigadzirwa zvemakabineti nematombo e-turquoise kuti aratidze zvinoenderana, kuitira kuti nzvimbo irege kuratidzika sediki uye iunze hunyoro nekunyaradza, chinova chinhu chinokonzera mamiriro enzvimbo.
Iyo yakavhurika nharaunda inoratidza yakadzika yehupenyu chiitiko, uye ndangariro dzeimba dzinozozviunganidzira zvishoma nezvishoma kubva kune chaicho chiitiko uye manzwiro ekunzwa.
Iyo modular sofa izere nekushamisika kwekuona, uye chimiro chisingaonekwe chemuchadenga musanganiswa izere nehunyanzvi mutinhimira, inosanganisira kusangana kweyepfungwa enesthetics, runako, uye yakasarudzika mativi-matatu chimiro mukati mekugadzirwa kwenzvimbo.
Dhizaini yenzvimbo inoenderana nekunzwisisa, uye fungidziro yedenga ine nhanho inoshanda, inova hwaro hwekuremerwa kwekugadzirwa.
Pasi pemugadziri wemugadziri, akasiyana shades egrey uye machena akasanganiswa zvine hungwaru, uye kudhumhana kwezvinhu uye manzwi kunounza mweya wehunyanzvi.
Iyo asymmetrical marongero uye zvinhu shanduko zvinoramba zvichigadzira nzvimbo munzvimbo, uye runyararo runyararo lwenzvimbo rwunobvumira vanhu kuti vasiye vega kwechinguva, chengetedza pfungwa dzavo uye vapinde mukati, uye vanyurire pachavo mune inodziya muyero wemukati sezvazviri kunge.
Kurongeka kwese kunoteera musimboti wekunetsekana uye kutandara, uye matte esimbi pfungwa inotaurira kuratidzwa kwenzvimbo.
Iyo tirairi tareti iri paimba yekugezera inopa nyowani inonzwisisika yekushongedza fomu. Pasi pekupa kwesimbi uye nechiedza, zvinoumba iwo chaiwo maonero ekuona.
Nzvimbo yeakavhurika chiyero kurongeka
Munzvimbo huru yekuona yeimba yekutandarira, mugadziri anogadzira rusvingo rwakakomberedzwa uko zuva rinoyerera uye rinoshanduka muchadenga, ichigadzira kurudziro yakachena uye ichipa vanogarako chinguva cherunyararo rwepfungwa chakafukidzwa nemasikirwo.
Iyo matrix ye openwork ine yakaenzana mutinhimira, uye kana iwe ukatarisa pairi, yega yega yekupedzisira maonero inovanza kurongeka uye runako rwekutenderedza.
Iyo yakavhurika yekicheni pasi yakakwidziridzwa zvishoma kuti itaridze miganhu yemunda wakasarudzika, uye mugadziri anoshandisa mwenje wakasanganiswa nezvinhu zvakachena kugadzira pfungwa yehutongi munzvimbo.
Mugadziri akasarudza kushandisa zvishandiso zvekududzira maratidziro ekudzungaira kwechiedza, uye kuomarara uye kusimba kwehuni hwakasimba kunopa nhetembo dzakaderera kwese kwese.
Chiedza chechisikigo chinounzwa mukamuri kuburikidza nemahwindo, zvichipa nyoro uye inozorodza mweya yenzvimbo, uye musanganiswa wegirima rakasvibirira uye wepakutanga huni hunoburitsa hupfumi hwematanda.
Iyo yakavhurika inoshandisa mwenje nemumvuri seye canvas uye zvishandiso senge izvo zvinhu kugadzira rugare uye rugare runyararo rwepfungwa, sekunge sekunge nguva yakamira panguva ino.
Imba yekugezera hombe yakagadzirirwa neavocado girini izere nepfungwa dzepanyama, iyo nzvimbo yakafara uye ine mhepo, uye matani akanaka anoonesana, pfungwa dzinowana zororo uye nhanho kupinda munyika ine rugare yemweya.
Dhizaini yeruzhinji yekugezera inowanzo kuve ine musoro, kwete yekunyepedzera, asi mukutsvaga kwekupedzisira kukwana mune ruzivo.
Pakapfuura :: Yakananga Makakombama, Kudzungairirana kudyidzana, Nyowani Maitiro mune Akasiyana Uye Anoshanda Mahofisi | Yuqiang Dhizaini Zvadaro: Maitiro Ekugadzira Iyo Yakaremerwa Patio Iyo Iri zana Nguva Yakawedzera Kupfuura Iyo Yetsika Patio?